I-Jaro v Krkonoších, iRokytnice nad Jizerou, Buřany, Františkov - Umculo wamahhala kunye nokulandelwa kweendaba zakho zevidiyo ze-YouTube okanye iiprojedidiya
ikhayaiiKrkonošeSpring in the Giant Mountains, Rokytnice nad Jizerou, Buřany, Františkov
Spring in the Giant Mountains, Rokytnice nad Jizerou, Buřany, Františkov	Ushiye uluvo
iiKrkonoše (I-Riesengebirge yaseJamani, i-Polish Karkonosze) yinto epheleleyo kunye neentaba eziphakamileyo kwiCzech nase-Highlands. Lihlala ngasempuma-mpuma yeBohemia (inxalenye esentshonalanga ehlala kwingingqi yaseLiberec, kwicala elingasempuma ye Královéhradecký) naseningizimu yePoland ingxenye yeSilesia. Intaba ephakamileyo kwiiNtaba zeGuant i-Sněžka (1603 m). Ngokomgca, ulinda iiKrkonoše umoya weengingqi wase Krakonos. Ngenye yezona ndawo zixhaphakileyo kwiintaba zaseCzech Republic.
Uluhlu oluninzi lweentaba olubandakanya namhlanje iiKrkonoše Uye ukususela kumaxesha amandulo ichazwa njengokuba Sudetenland, eyiyeyona igama Celtic imvelaphi (kakhulu ngokuqhelekileyo eliguqulelwa ngokuthi yehagu entabeni) okanye imvelaphi Balkan (eliguqulelwa ngokuthi Goat Mountain). UPtolemy (malunga 85-165) isetyenziselwa yanamhlanje Sudetenland Amagama Sudetayle (i-Ore Mountains) kunye Askiburgion (ingakumbi Mountains, kufutshane nedolophu Askiburgium ukonakaliswa, mhlawumbi ku Lusatian Mountains, kuquka kwiiNtaba Ezinkulu). Dio Cassius e 3. leminyaka wasebenzisa igama iintaba Askiburgion vandal. Emva kokuba iimephu Ptolemaic weza Czech Republic Bohuslav Balbin kunye Pavel kwedwala kusukela phezulu usebenzisa igama ulwandiso Sudetenland ukuya lonke band (17. Century).
Kuphela iiKrkonoše Zincwadi zeRashiya ze-1095 ezibizwa ngokuba yihlathi laseCzech  kunye nePřibík Pulkava kwi-1380 ibizwa ngokuba yi-Snow Mountains.
Name kwiiNtaba ekuqaleni ochazwe high Kolo yanamhlanje kunye kwibhoyila okanye Kokrháč.  Ukwalathelwa kwiiNtaba (isinye esobukhomokazi ", i" Mountains Giant) ukuya kummango uvela 1492 kwingxelo welifa division Štěpanice kwi Wallenstein kunye Jilemnický inxenye, kwi 1499 ngoko nangezenzo Vladislav II., imephu endala eliseleyo kuloo gama lasebenza Nicholas Klaudyán e 1518. Wenceslaus Hajek e umlando yakhe 1541 wasebenzisa igama Czech kunye Silesian kwiiNtaba Ezinkulu.
Ubungqina bokuqala bokuba ukwandiswa kwegama kuyo yonke intaba kuphuma kwi-1517, xa igama lakwaKronoše Mountains lisetyenzisiweyo, ukubhaliswa kweKronoše kwazalisa umfanekiso kaMtyholi. Igama elifutshane iiKrkonoše Ekuqaleni zibhalwe kunyaka 1601. Igama amaninzi ithathwa yemvelaphi isiseko Slavic "entanyeni" okanye "cracker", into ethetha, nenomlanga pine okanye ntaba pine, Josef Jungmann kunxulunyaniswa kunye igama zesiJamani okanye Celtic isizwe Corconti okanye Korkontoi, ababalulwa nguPtolemy, kunye kwinkolelo yokuba inokwenzeka okhankanywe iintaba Asciburgius waba elifana namhlanje kwiiNtaba (Korkontoi Musa ukuba ahlale naphi na kufutshane emithonjeni Vistula, okanye mandithi Beskydy). Olunye uphando ukuchaza imvelaphi igama labhalwa isiseko, elithetha "kwithambeka enamatye, intsimi enamatye" yaye ucebisa unxibelelwano igama ezintabeni Ukrainian Gorgany eMpuma Carpathians.
I-Reservoir yamanzi i-Les Království - I-Carp Rod & Praga V3S →